जण्डिस हुने कारणहरु - Jhapa Online
जण्डिस हुने कारणहरु
डा. लेखनाथ न्यौपाने
मानव शरीरको महत्वपूर्ण अंग कलेजो (लिभर)मा हुने विभिन्न खाले विषाणु (भाइरस) को संक्रमण र त्यसले उत्पन्न गर्ने रोगजस्तै शरीर पहेँलो हँुदै जानु, पिसाब पहेँलो हुँदै जानु, आँखा पहेला हुँदै जानु, वान्ता हुनु, खाना अरुची हुनु, जिउ चिलाउनु वा रगतमा भाइरसको उपस्थिति रहिरहनु नै हेपाटाइटिस अथवा जण्डिस हो ।
हेपाटाइटिसलाई पनि दुई भागमा विभाजन गरिएको छ । एउटा कलेजोलाई मात्र असर गर्ने भाइरस जस्तै हेपाटाइटिस ए, बी, सी, डी र ई । यी भाइरसले कलेजो बाहेक शरीरका अन्य अंगलाई दीर्घकालीन असर पुर्याउँदैनन् । अर्को एक प्रकारको भाइरस हुन्छ जसले जण्डिस मात्र गराउँदैन शरीरका अन्य अंगलाई पनि असर गर्छ । त्यो भाइरस हो हर्पिस सिम्पेक्लस र इव्स्टेनवर भाइरस ।
यी भाइरसले जण्डिस सँगै शरीरका विभिन्न अङ्गमा दीर्घकालीन असर गर्छन् । तर, यी भाइरसबाट जण्डिस भने कमै मात्रमा हुने गर्छ । यता, हेपाटाइटिस बी र सी भने निक्कै कडा खाले भाइरस हुन् र शरीर (कलेजो)मा प्रवेश गरेपछि हराउन निक्कै कठिन हुन्छ ।
साधारणतया भाइरल हेपाटाइटिसलाई दुई समूहमा बाँढिएको छ । एउटा प्रदुषित पानी तथा खानेकुराबाट सर्ने गर्छन् ती हुन् हेपाटाइटिस ए र ई । दोस्रो समूहमा हेपाटाइटिस बी, सी र डी पर्छन् । यी भाइरस मानिसको शरीरमा रगत या रगत जन्यवस्तु र आमाको कोखबाट जन्मँँदा सर्ने गर्छन् । यी भाइरस निक्कै कडा हुन्छन् र हतपत शरीरबाट जान चाहँदैनन् । त्यसैले हेपाटाइटिस बी र सी रगतमा देखिएका धेरै बिरामी उपचारको खोजीमा भौतारी रहेका हुन्छन् । हेपाटाइटिस बी र सी लाई समाजमा निक्कै डरलाग्दो र निको नहुने रोग भनेर हल्ला गरिएको भए पनि यी रोग निको हुने रोगमा पर्छ । आजको अङ्कमा हेपाटाइटिसका विविध पक्षमा चर्चा गरौँ ।
जब शरीरमा माथि उल्लेख गरिएका जण्डिस उत्पन्न गराउने हेपाटाइटिस भाइरस प्रवेश गर्छन् । यी भाइरस कलोजोमा गएर सङ्ख्या बृद्धि गर्दै बाधा पुर्याउन थाल्छन् । जसका कारण कलेजोले गर्ने नियमित काममा बाधा पुग्न जान्छ र शरीरमा पहेँँलोपना देखा पर्न थाल्छ । कलेजोबाट निस्केर पित्तथैलीमा जम्मा हुने पित्त रगतमा फैलिन थालेपछि शरीर पहेँलो हुने चिलाउने वान्ता हुने, पिसाब पहेँलो हुने दिसा सोतो (पेल) हुँदै जाने थकाइ लाग्ने खाना नरुच्ने जस्ता लक्षण देखिन थाल्छन् ।
यता, आँखा पहेँला हुँदै जानु, जीउ पहेँँलो हुनु, वजन घट्नु पनि प्रमुख रोगको चिन्हमा पर्छन् । यो अवस्था भनेको जण्डिस हो । त्यसैले हेपाटाइटिस भाइरस जण्डिसको एउटा प्रमुख कारण हो भने जण्डिस हुने अन्य कारण पनि हुन्छन् । त्यसमा पित्त नलिमा अवरोध उत्पन्न् हुनु, धेरै कुप्रभाव भएका ओषधीको सेवनजस्तै टिबी रोगको औषधिसेवनमा या अन्य रोगको उपचारको क्रममा जण्डिस देखिन सक्छ ।
जण्डिस रोगको कारण नभएर परिणम हुने भएकाले कारण के हो ? पत्ता लगाउनु ज्यादै महत्वपूर्ण हुन्छ । माथि भनिएका विभिन्न खालका विषाणु (हेपाटाइटिस) कारण हुन् । जण्डिस गराउने हेपाटाइटिस ए र ई प्रदुषित पानी या खानेकुराबाट सर्ने गर्छ । विशेषगरेर पानीको मुहान वरपर यी विषाणु फैलिन पुगे या संक्रमित मानिसको दिसापिसाबबाट पानी दुषित हुनपुग्छ । यही पानी नउमाली र शुद्ध नगरी पिएमा यी किटाणु खाना पानीको माध्यम भएर कलेजामा पुग्छन् र रोग फैलाउँँछन् ।
उता, हेपाटाइटिस बी सी र डी भने रगत जन्यवस्तुबाट सर्ने हुँदा संक्रमित व्यक्तिबाट सर्ने गर्छ । जस्तै रगत दिँदा या लिँदा, असुरक्षित यौन सम्पर्कबाट, सुई जन्यवस्तुबाट जस्तै एक जनाले प्रयोग गरेको सिरिञ्ज अर्को जनाले प्रयोग गर्दा या शारीरिक तरल पदार्थजस्तै थुक, र्याल, विर्य पसिना, संक्रमित आमाबाट जन्मेका सन्तानमा आदि । तर, शारीरिक तरल पदार्थबाट सर्ने सम्भावना भने न्यून हुन्छ ।
हेपाटाइटिसका कारण जण्डिस भएमा के गर्ने ? के नगर्ने ? यसको जनाकारी हुनु आवश्यक छ । सर्वप्रथम त सम्भव भए रगतको परीक्षण गराउने । गाउँ–समाजमा यस्ता लक्षण अरुमा पनि देखिएका छन् कि छैनन् सो बुझ्ने । यदि छन् भने माथि भनिएजस्तै कतै पानीको मुहान प्रदुषित भएको हुन सक्छ । त्यसका साथै अन्य कारणहरु पत्ता लगाउने प्रयास गर्ने ।
बिरामीलाई सफा र शुद्ध पानी प्रशस्त पिलाउने, नरम र पच्नयोग्य खानेकुरा दिने । आराम ज्यादै महत्वपूर्ण हुन्छ । किनकि यो रोगमा कलेजो सुन्निएको हुन सक्छ । कडा परीश्रम गरेमा कलेजो र अन्य अङ्गलाई भारपर्न गई रोग निको नहुने र बल्झिने सम्भावना रहन्छ । पुरानो मान्यतामा झारफुक गर्ने, बेसार नखाने भन्ने कुरामा कुनै वैज्ञानिक सत्यता छैन । जण्डिस लाग्यो भनेर धेरै कुरा बारेका कारण कमजोरी र रक्तअल्पता भएका धेरै बिरामीहरु जचाउँन आउने गरेका तथ्य यो स्तम्भकारले पाएको हुँदा बिरामीमा गलत उपचार भएको पाइन्छ ।
त्यसैले हेपाटाइटिस रोगको कारण र जण्डिस लक्षण मात्र हो । रोगको कारण पत्ता लगाएर उपचार गरेमा चाँडो निको हुन्छ । यदि हेलचेक्राइँँ गरेमा र धामझाँक्रीमा र झाफुकमा मात्र सीमित रहेमा बिरामीकोे मृत्युसम्म हुन सक्छ ।
हरेक वर्ष विश्वमा हेपाटाइटिसका कारण १५ लाखभन्दा धेरै मानिसको मुत्यु हुने गर्छ । र, यो विश्वमा संक्रमक रोगबाट मानिसको मृत्यु हुनेमा आठौँ स्थानमा पर्छ । त्यसैले हेपाटाइटिसलाई सामान्य सम्झेर नबसौँ र सही उपचार खोजौँ । विश्व स्वास्थ संगठनले यस्तो ज्यानलेबा बिरामीका बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी होस् र समयमा नै सही उपचार बिरामीमा पुगोस् भन्ने उद्देश्यले हरेक वर्ष जुलाई २८ तारिक हेपाटाइटिस दिवस मनाउने गरेको छ ।
हेपाटाइटिस भाइरसका कारण, सही उपचारको अभाव र जनचेतनाको कमीका कारण कलान्तरमा संक्रमित व्यक्तिमा कलेजाको सिरोसिस र क्यान्सरसम्म भएको पाइन्छ भने अर्कातिर जण्डिस भन्दै लामो समयसम्म पोषिलो खानेकुरा नखाएका कारण अन्य रोग लाग्ने सम्भावना पनि बढेर जान्छ । त्यसैले हेपाटाइटिसलाई राम्रोसँग बुझ्नु जरुरी छ । अझ बुझ्नै पर्ने कुरा के छ भने हेपाटाइटिस बी र सी निक्कै समयपछि मात्र रगतबाट हराउने गर्छ । राम्रो पोषिलो खानेकरा खाने नियमित व्यायाम गर्ने होमियोप्याथिक या आयुर्वेदिक औषधीको सेवन गरेमा हेपाटाइटिस निको हुन्छ ।
अर्को जान्नै पर्ने कुरा के छ भने यो रोग लागेका व्यक्तिसँग हात मिलाउँदैमा सँगै बस्दैमा एउटै ओच्छ्यान प्रयोग गर्दैमा हेपाटाइटिस भएका मानिसबाट अर्कोमा सर्दैन । हेपाटाइटिस बी र सी रगतमा वा कलेजोमा लामो समयसम्म बस्ने हुँदा विस्तारै कलेजोलाई कमजोर बनाउन सक्छ भन्ने हो । त्यसैले यसका बारेमा बेलैमा सचेत हुनु जरुरी छ ।
(लेखक न्यौपाने होमियोप्याथिक चिकित्सक हुन् ।)
१४ वर्षीय उज्जवलको डिस्चार्जका लागि रकम अभाव
भान्सा कोठामा लसुनको पत्ता फलाउने तरिका
बिर्तामोड नगरप्रमुख शिवाकोटी भन्छन्– ‘सुनलाई पित्तल बनाउन खो‌जे‌का थिए, भइदियो‌ हिर‌ा’ (अन्तरवार्ता)